Axad, Dec 27, 2020-Dowladda oo ciidamo gaar ah u diyaarineysa amniga doorashooyinka – LaacibOnline
Axad, Dec 27, 2020-Dowladda oo ciidamo gaar ah u diyaarineysa amniga doorashooyinka
December 27, 2020 Abdirisaaq	0 Comments
Axad, December, 27, 2020 (HOL) – Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in ay ciidamo gaar ah u diyaarineyso Amniga Doorashooyinka, iyadoo dhawaan la filayo in dalka ay ka dhacdo doorashada heer Baarlamaanka iyo Madaxtooyo.
Wasiiru-dowlaha Wasaarradda Amniga Dowladda Soomaaliya Farxaan Cali Axmed oo warbaahinta la hadlayay ayaa sheegay in dowladdu qorshe gaar ah u diyaarisay amniga doorashada, kaasoo sida uu hadalka u dhigay heshiisku ku wada yihiin madaxda dowlad gobolleedyada.
Ciidamada ka wada -qeybqaadanaya Amniga doorashada oo isugu jira Amisom iyo kuwa dowladda Soomaaliya ayaa loo qeybin doonaan sida uu sheegay Wasiiru-Dowlaha Amniga ilaa 11 magaalo oo ka tirsan dalka Soomaaliya.
Guddiga Doorashada heer Federaal ayaa dhawaanta shaaciyay jadwal cusub oo doorasho iyaga oo faray madaxda dowlad gobolleedyada in ay deg deg u soo gudbiyaan liiska musharixiinta u tartamaya Golaha Aqalka sare.
← Axad, Dec 27, 2020-Wadooyinka Baledweyne oo xiran iyo dad badan uu ku jiro afhayeenka Golaha Samata Bixinta Hiiraan oo goordhaw xabsiga la dhigay
East Africa: Annus Horribilis – Why 2020 Was the Horn of Africa’s Worst Year →
Sabti, July 4 , 2020-Dowladda Soomaaliya oo Iran ka dalbaday inay jawaab ka bixiso jarriifka maraakiibteedu ku hayaan biyaha Soomaaliya